မောင်အံစာ ခရီးသွား မှတ်တမ်း .. ၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » မောင်အံစာ ခရီးသွား မှတ်တမ်း .. ၁
မောင်အံစာ ခရီးသွား မှတ်တမ်း .. ၁
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Dec 26, 2012 in Photography, Travel | 42 comments
အံစာတုံး ခရီးသွား မှတ်တမ်း
ကျုပ် … ကံကောင်း ထောက်မစွာနဲ့ပဲ …
တောင်ကြီး အင်းလေး ကို ခရီးထွက်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ် ….
ရောက်တုန်း ရောက်ခိုက် ဟိုရိုက် ဒီရိုက် ဒါ့ပုံတွေ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ် …
ဒါတွေထဲကမှ ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကို တင်လိုက်ပါတယ် …
ရန်ကုန်ကနေ ည (၁၀း၀၀) ဝန်းကျင်မှာ ထွက်ခွာခဲ့တယ် ….။
ပြီးတော့ နေပူတော် ဟိုနေရာမှာ ဝါးဒီး ဝင်ဆွဲပြီးတော့ ခရီးဆက်ခဲ့တယ် …။
ပြီးတော့ ကလောဘက်ကို ဦးတည်သွားတယ် ….။
ကလော အကျော် အောင်ပန်း အရောက်မှာ မနက်စာ ဝါးဒီးဆွဲဖို့ နားတယ် ….။
အဲ့ဒီမှာ စတွေ့တာပဲ …။ အတော်လေးကို အေးပါတယ် ….။
နေရောင် မဖောက်နိုင်သေးတဲ့ ဆောင်းနှင်းကြားက မနက်ခင်း
အဲ့ဒီကနေမှ .. မနားသေးဘဲ … ဆက်လက် ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ် ..
လမ်းကြားမှာ နေကြာပန်းခင်းကြီး တွေ့တာနဲ့ ဝင်ရောက် ဒါ့ပုံ ရိုက်ကြပါတယ် ..
ကျုပ်လည်း အားကျမခံ ဟောဒီလို ရိုက်ခဲ့တယ် ….
နေရောင် နွေးနွေးအောက်မှာ မျက်နှာလေး တောက်ပနေတဲ့ နေကြာပန်းပွင့်လေး
နေကြာပန်းခင်း မှတစ်ဆင့် ကုံလုံဆရာတော်ကြီးရဲ့ ကျောက်ဖြစ်လို့ ဆိုနိုင်မလား၊
ဘယ်လို ဆိုနိုင်မလဲ မသိဘူး၊ ရုပ်ကလာပ်တော်ကို ဖူးမြောက်နိုင်ရန် သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ် …။
အဲ့ဒီမှာ ကုံလုံ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ရုပ်ကလာပ်တော်ကို ဖူးမြော် ခဲ့ရပါတယ် …။
ဆရာတော်ရဲ့ ခန္ဓာဝန်ဟာ အတော်လေး ကျုံ့နေတာကို ဖူးတွေ့ခဲ့ရပါတယ် …။
ခြေသည်းများဟာလည်း ရှည်လျားနေတာကို တွေ့ရပါတယ် …။
သိပ်ပြီး မရှင်းလင်းသလို၊ ဘဝင်လည်း မကျ ဖြစ်ရတာကတော့ ..
ဆရာတော်ကြီး သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်က တိုင်းတာပြီး မှတ်တမ်း ထားရှိတဲ့ လက္ခဏာပုံစံတွေနဲ့
“နောင်ပွင့်မည့် ဘုရားကို ပင့်၍ ဘဘုန်းက ၎င်းနှင့် တူ၊ မတူ မေးမြန်းနေပုံ” .. ဆိုတဲ့ အချက်တွေပါပဲ …။
ကုံလုံဆရာတော်ကြီးရဲ့ ရုပ်ကလာပ်တော် ထားရှိရာ ကျောင်းတော်
ကုံလုံ ဆရာတော်ကြီး၏ ရုပ်ကလာပ်တော်
ကုံလုံဆရာတော်ကြီးရဲ့ ရုပ်ကလာပ်တော်ကနေ …
ပင်းတယရွှေဥမင် လိုဏ်ဂူတော်ဘုရား ဆီကို ခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ် ….။
အဲ့ဒီ ဘုရားကြီး ရှေ့မှာ ပင့်ကူရုပ်ကြီးနဲ့ လေးနဲ့ ခွင်းနေတဲ့ လူကြီး (ပျူစောထီး ထင်ရဲ့) ရုပ်တုတွေကို တွေ့ရပါတယ် …။
ဒါနဲ့ပဲ အဲဒီ ရုပ်တုကြီးနဲ့ အမှတ်တရ ဒါ့ပုံ ရိုက်ခဲ့တယ် …။
ပုံထဲက ကျုပ် မဟုတ်ပါဘူး … ရိုးရိုး ရုပ်တုဗျောင်ကြီး ရိုက်ထားတဲ့ပုံ မရှိလို့ ဘော်ဒါ ပါတဲ့ ပုံပဲ တင်ပေးလိုက်တယ် …
ပင်းတယ ရွှေဥမင် လိုဏ်ဂူဘုရား ရှေ့က ပင့်ကူကြီးနဲ့ အမှတ်တရ ဘော်ဒါတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံ ..
လိုဏ်ဂူထဲမှာ ဘုရား ကိုယ်ပွားတော်ပေါင်း မြောက်မြားစွာ ဖူးတွေ့ခဲ့ရပါတယ် …။
ဂေါပက လူကြီးတစ်ဦးက ဂိုက်လုပ်ပြီးတော့ ဘုရားရဲ့ သမိုင်း၊ ဂူရဲ့ သမိုင်းတွေကို ရှင်းပြ ခဲ့ပါတယ် …။
အဲ့ဒီ လိုဏ်ဂူထဲမှာပဲ ရှေးက ဆရာတော်ကြီး တစ်ပါး ၈ နှစ်ကြာ တရားထိုင်သွားတဲ့
ဂူငယ်လေးထဲကိုလည်း ဝင်ရောက် ခဲ့ပါသေးတယ် …။
ပင်းတယ လိုဏ်ဂူပေါ်က မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်း တစ်ခု
ပင်းတယ လိုဏ်ဂူကနေ ပြန်လာတော့ နားကြပါတယ် ….။
နောက်တစ်နေ့ မနက်မှာတော့ ခရီး ဆက်ကာ ထွက်ခဲ့ပါတယ် …။
လမ်းခုလတ် အရောက်မှာ နေရောင်အောက်မှာ ရေတွေ အငွေ့ပျံတက်နေ ကန်ရေပြင် မြင်ကွင်းကို တွေ့ရတော့
ဆင်းပြီးတော့ ဒါ့ပုံ ရိုက်ကြပါတယ် …။
ကျုပ်လည်း အားကျမခံ ကိုင်ထားတဲ့ ကင်မရာ အစုတ်လေးနဲ့ ဟောဒီလို ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် …။
ရေတွေ အငွေ့ပျံနေတဲ့ တစ်မျိုးထူးနေတဲ့ ဟန်
ရေငွေ့ပျံနေတဲ့ ရေကန်ဆီက ခရီး ဆက်လက် ထွက်ခွာလာတဲ့ အခါ …
ဟိုငေး ဒီငေး ငေးရင်းနဲ့ ဟောဒီလို မြင်ကွင်းလေး တွေ့ရတော့
လက်က အငြိမ် မနေနိုင် ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ် …။
တစ်ပိုင်း ပြီးပြီ ……….။
နောက် နှစ်ပိုင်း ဒါမှ မဟုတ် သုံးပိုင်း ကျန်သေးတယ် ….။
အားပေးကြသူ အပေါင်းကို ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ ……။
ကုံလုံဆရာတော်ကြီးကို ဖူးမျှော်ရင်း ဒါ့ပုံလေးတွေလည်း ကြည့်သွားပါတယ်.
နေကြာပန်းပုံလေးနဲ့ နတ်ပြည်လေလားပုံလေးကို သဘောတွေ့သတော်…
ဆက်ရန်ရှိ ဆိုလို့ မျှော်နေပါ့မယ်..
ပုံလေးတွေက ဆန်းသား … တစ်ခြားသူတွေတင်တာမြင်ဖူးပေမယ့် … အခုမောင်မောင်အံရိုက်ထားတဲ့ ပုံကိုကြည့်ရတော့လည်း အမြင်ဆန်းနေသလားလို့ … ညည်းဘော်ဒါကဘယ်သူလဲအေ … သူများပုံကိုများ တင်ရတယ် လို့ …. အဲဒါညည်းပုံလို့ကျုပ်ကထင်နေတာ ………
အငွေ့ပြန်နေတာက ဘုတ်တလုတ်ကန်လား။ ဒွေးမယ်နော်တို့ ရေကူးတာ ချောင်းခဲ့သေးလား။
ပင်းတယ ဂူထဲက ကျောက်စက်ပန်းဆွဲတွေရော နောက် ပို့(စ) မှ တင်မှာ လား။ (မေးတာ အတော်များသွားပြီ) :harr:
နောက်ဆုံးက ဓာတ်ပုံကို အကြိုက်ဆုံးပဲအေ။
ဒွေးမယ်နော်တို့ရေကူးတာက ငွေတောင်ပြည်မှာဟုတ်ဖူးနား မမရေ..
လာရောက် အားပေးသွားတာ ကျေးကျေးဘာနော့ …
ဒွေးမယ်နော် သာ အဲ့ဒီကန်မှာ တကယ် ရေးကူးနေမယ် ဆိုရင် ..
ဒီတောင် ပြန်ရောက်မှာ မီဟုတ်လောင်ဘူး ..
ငွေတောင်ပြည်ကို လိုက်သွားမှာ …
သိပါဘူးကွယ်။ ၁၉၉၇ လောက်က သွားတုန်းက ရှင်းပြတာ အဲလို မှတ်မိတာပဲ။
ဒီ ညီအမတွေ ရေကစားဖူးတဲ့ ကန်တိုင်းက ဘုတ်တလုတ်ကန်ဖြစ်သလား။ သူတို့က ပဲ ဘုတ်တလုတ်ကန်တိုင်း ရေလိုက်ကစားသလားပဲ။
ဘုတ်တလုတ်ကန်ဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်။ အဲ ကန်အောက်က လှိုဏ်ဂူက ပုဂံ နဲ့ ဆက်နေတယ်လို့ကြားဖူးတာပဲ။ တစ်ခါ လူဝင်ပြီးပြန်ထွက်မလာလို့ ပိတ်လိုက်တယ်ပြောတယ်။
တစ်ချို့ကလည်း ဝင်သွားတဲ့ ကိုရင်လေးကို ပုဂံဘက်မှာ ပြန်တွေ့တယ် ဆိုလား။ ဘာမှတော့ မသေချာပါဘူး။ ပြောကြတာပဲ။
ပထမဆုံး လာရောက် အားပေးတဲ့အတွက်
မျှော်နေမယ်ဆိုလို့လည်း တင်ဖို့ စိတ်အားတက်ရပါတယ် …။
တင်မှာဘာ ..။ အခန်းဖြတ် ထားဘာဘူးလို့ …။
မာမီက သားသား ဘော်ဒါကို သိဘူးလား ..
အိုက်ကောင်က လူ့သွားတွေရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ပါတတ်တယ်လေ …
ဒီပဟေဠိကို ရအောင် ဖော်ဘေဒေါ့ …
မေးထားတာတွေတော့ ဖြေချင်သား …
ဒါပေမယ့် ဖြေနိုင်ဘူးရယ် …
အငွေ့ပျံနေတာ ဘုတ်တလုတ်ကန်တော့ ဟုတ်ဘူး …
ဂူထဲက ကျောက်စက်ပန်းဆွဲတွေကိုလည်း ရိုက်ထားတာတော့ ရှိတယ် ..
ဒါပေမယ့် သိပ်မကောင်းလို့ တင်ဒေါ့ဘူးရယ် …
အားလုံးဘဲ လာရောက် အားပေးဒါ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ ….
ပင်းတယကို တောင် နောက်တစ်ခေါက်ထပ်သွားချင်စိတ်ပေါ်သွားပြီနော်။
ဓာတ်ပုံတွေမြင်ရတော့ 2001 ခုနှစ်လောက်ကရောက်ခဲ့တဲ့ တောင်ကြီးခရီးလေးကိုသတိရတယ်..
ပုံတွေကြည့်ပြီး လွမ်းသွားပါကြောင်းနဲ့ နောက်ခရီးစဉ်အပိုင်းများကိုဆက်မျှော်နေရင်း…..
မေ့သွားလို့ နတ်ပြည်လို ကကျနော်အမြဲတမ်းနှစ်သက်မက်မောတဲ့ မြင်ကွင်းလေးပါဘဲ
နောက်တစ်ခေါက် ထပ်သွားချင်ရင် သွားလိုက်ပေါ့ဗျာ .. အဟီးးး
အငွေ့ပျံနေတဲ့ ပုံက ကားပေါ်က ရိုက်ထားတာရော ..
အောက်ဆင်းပြီး ရိုက်တဲ့ ပုံတွေရော ပါပါတယ် …
ခု ပုံကတော့ … အောက်ဆင်းပြီးမှ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံပါ ခင်ဗျ ..
လာရောက် အားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ …
ကုံလုံ ဆရာတော်ကြီးကို သက်ရှိထင်ရှား ဖူးခွင့်ရလိုက်တယ် ဆိုတော့ ..
အတော် ကောင်းတာပဲဗျ ….
မျှော်နေမယ်ဆိုလို့လည်း အားဖြစ်ရပါ့ဗျာ ..
နောင်ဘ၀ နတ်ပြည် မယုံသူများ.. ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောများများစီးပေး၊ လေယာဉ်ပျံများများစီးပေး ဒါမှ
အဲ့လိုဓါတ်ပုံတွေ များများကြည့်ရင် သဘာဝလောကကြီးရဲ့
ထူးဆန်းမှုတွေ လက်ခံရမယ်ဆိုချင်ဘာဒယ်.. အူးအံ့..
စိတ်နဲ့ သွားရင် ဗြဟ္မာပြည်တောင် ခဏခံစားလို့ရတယ်…။
သြော်.. ဇောသန်.. ဈာန်ဖြစ်…
ပင်းတယ ရွှေဥမင် လိုဏ်ဂူဘုရား ရှေ့က ပင့်ကူကြီးနဲ့ အမှတ်တရ ဘော်ဒါတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံ .
ခြောက်မျက်နှာ ရဲ့ ဘော်ဒါကလည်း
မနိုသိတဲ့ 21ပေါက်ပါတဲ့ အံသွားနဲ့ အတော်တူပဲနော်
ဆရာတော်ကြီး သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်ကဖူးဘူးတယ်
ထူးခြားတာကတော့ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ခြေဖ၀ါးတော်က သစ်သီးတစ်ခုရဲ့ မွှေးရနံ့လိုမျိုး
သင်းသင်းလေးရနေတာကို ဦးခိုက်နေရင်းနဲ့ ရခဲ့ဘူးပါတယ်
ကရင်စီက သင်္ဘောကြီးနဲ့ လျှောက်သွားနေရတဲ့လူဆိုတော့ …
အဲ့ဒီလိုမျိုး မြင်ကွင်းတွေ အားကြီး မြင်ဖူးမှာပဲဗျ …
ဒါ့ပုံလေး ဘာလေး ရိုက်ပြီး တင်ပါလားဗျာ …
ကျုပ်တို့ မြင်ဖူးအောင်ပေါ့ …
ဆိုတော့ကာ …. အဟီးးး
ဂလိုလေးဘဲ သွားဗျဲ ပြလိုက်တော့မယ် …
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မဖူးလိုက်ရဘူးဗျာ ….
အဲ့ဒါကြောင့် သိပ်မသိဘူး …
ထေရုပ္ပတ္တိတွေ ရှာဝယ်ပြီး ဖတ်ရဦးမယ် …
ခုလို ပြောပြပေးလို့ ကျေးဇူးပါဗျို့ …..
အဲဒါ ညဉ်း ပုံကြီး ပဲ မဟုတ်ဘူးလား။
တခေါက်ရောက်ဖူးပေမယ့် ပြန်သွား ချင်တယ်၊ ဘယ်တော့ မှ ရောက် ဖြစ် မလဲ မသိဘူး။
ဇွဲ မလျှော့နဲ့ ရောက်လုပြီ .. ကြိုးစား တက်ပါမည် ..
ဘာညာ သာရကာ နေကြာကွာစိ …
တကယ် သွားချင်ရင် တကယ် ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ …
အဲ့ဒီ ထဲမှာမှ တောင်ကြီးက အတော် နေလို့ ကောင်းမယ့် မြို့ပဲဗျ …
(တောင်မလေးဒွေဂ ပေါလည်းပေါ၊ ချောလည်း ချောဂျဒဂိုး)
ဟိုပုံကတော့ … ဟုတ်ပါဘူးဂျာ …. အဟီးးး
မှန်ဂလာ့ပါ ကိုအံစာဂျီးရေ အခုလို ဒါ့ပုန်းရိုက်တဲ့ လက်ရာဂလဲ မစိုးပါလားဗျ။
ပုံတွေအကုန်လုံးကို ကူးယူထားလိုက်ပါဒယ်ဗျာ။ နောင်အခါ ကြုံကြိုက်ရင်
ကိုယ်ဘဲ တောင်ကြီးရောက်ဖူးသလိုလို ဘာလိုလို ဘော်ဒါဒွေဂို ပြန်လည်ဝေမျှဖို့အတွက်ပါ။
ခရီးသွားမှတ်တမ်း ၂ ကိုစောင့်မျှော်အားပေးချင်ဗါဒယ် မြန်မြန်လေး လုပ်ပါဗျို့။
အင်းလေးအမှတ်တရအနေဖြင့် ရေထဲကငါးပုံလေးတွေကို ကိုအန်စာ ရေငုပ်ပြီး
ရိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အင်မတန်မှ ရှု့ချင်တောင်းတဖြစ်လှကြောင်းပါ။
ရေထဲက ငါးပုံကို ရေငုံ့ပြီး ရိုက်ရမယ် …
အဲ့ဂလောက်ဂျီးတော့ မစွံ့စား ခဲ့ဘာဘူး ကိုရင်မိုဘိုင်းဖုန်းဂျီးရယ် ….
အားပေးသွားလို့ ကျေးကျေးဘာဗျို့ ….
ကင်မရာအစုတ်လေးတွေနဲ့ ရိုက်တယ် ပြောပြောနေကြပြီး ဂဇက်က ဓာတ်ပုံဆရာတွေရဲ့
နတ်ပြည်လေလား….လှတာကတော့ လူပါ တိမ်တိုက်တွေပေါ် လိုက်ပါမျောသွားမိသလိုပါပဲ…
ကြည့်လိုက်တာ ၆မျက်နှာ ဖြစ်နေပါလား။ :harr:
ပုံတွေကတော့ လန်ထွက်နေတာပဲ အန်ကယ်ရေ အန်ကယ့်သူငယ်ချင်းကရုပ်ဆိုးတာကိုက ပင့်ကူကြီးအတိုင်းပဲ သူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါဦး
ပင့်ကူကြီးနဲ့အတူ မောင်အံစာတုံး တွဲပြီးရိုက်တဲ့ ပုံတင်လိုက်ရင်
ရွာထဲရုတ်ရုတ်သဲသဲကို ဖြစ်သွားနိုင်မှာ ဘာလို့မတင်တာလဲဟင်။
ှုဦးခင်ခတော့ ခြောက်ပေါက်လှည့်တာ ခံရပြီ.. :hee:
တကယ်လို့များ ကျွန်တော်ချမ်းသာရင်… ကလောမှာသစ်လုံးအိမ်လေးတစ်လုံးဆောက်ပြီး…
ဆိုလာစစ်စတမ်နဲ့ အင်တာနက်… ရေခဲသေတ္တာ ဖက်စလတီအပြည့်အစုံနဲ့ ၀မ်ဂလာဂျစ်လေးတစ်စီးနဲ့ နေမယ်…
ဟဲဟိုးလေဆိပ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်လေးရပ်ထားပြီး… ရန်ကုန်ပြန်ချင်ရင်… ကိုယ့်လေယာဉ်ပျံကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး ရန်ကုန်ပြန်မယ်….
ကျန်တဲ့ ဒါ့ပုံတေကြည့်ဝူး၊ သွားချင်နေမစိုးလို့ :harr:
ရုပ်ကလပ်တွေကို မပုတ်မသိုးအောင်လုပ်ပြီး အပူဇော်ခံထားတာကိုတော့ စိတ်ထဲမှာ ဘ၀င်မကျပါကြောင်း ……..
ဟုတ်ကဲ့ဘာ ခညာ …
ယခုကဲ့သို့ ကျနော့်ရဲ့ ခရီးသွား ၁ လေးကို လာရောက် အားပေးသွားဂျဘာဂုန်သော
ချစ်စွာသော ရွာသူားအပေါင်းကို ကျေးကျေး ကမ္ဘာပါလို့ ….။
အံချာတုံး အင်းလေးသွားမှာကို မပြောဘူး ကြုံရင် ငါတို့အ်ိမ် ၀င်ခဲ့လို့ရတယ်ဟဲ့
လက်ဆောင်ပေးရသက်သာတာပေါ့အေ ပုံလေးတွေလည်း လှတယ်တော် ရိုက်တဲ့လူနဲ့ တခြားဆီ
ကျနော့်ကို နည်းနည်းလေး အမှားပြင်ခွင့် ပြုပါခင်ဗျာ။ ပင့်ကူကြီးကို မြှားနဲ့ခွင်းနေတာ ပြူစောထီး မဟုတ်ပါဘူး။ သုဓနုမင်းသားပါ။
ကိုစံလှကြီး ခင်ဗျာ …
ကျနော်က အကောင်ကြီးတွေကို နှိမ်နင်းတယ်လို့ ပြောပြီဆို
ပြူစောထီးကိုပဲ ပြေးပြေး မြင်တတ်တာ ခင်ဗျ …
ဒါကြောင့် ပြူစောထီး များ ဖြစ်လေမလား ဆိုပြီး သုံးလိုက်တာပါ …
ကိုစံလှကြီး ပြောလိုက်တော့ အမှန်သိသွားရပြီ …
ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ …
ဒါ့ထက် အဲ့ဒီ ရာဇဝင်လေးများ သိရင် ပြောပြစေချင်ပါတယ် ကိုစံလှကြီး ခင်ဗျာ ….
အောက်က ဦးမာဃ …
ခညားက ဘာတုန်းဗျ ….
နတ်ပြည်က ဒီထက် သာယာတယ်လေး .. ဘာလေးနဲ့ …
ခညားတို့ နတ်ပြည်ကို လူတွေ နည်းနည်း အထင်ဗစ်သွားအောင်
ပုံနဲ့ ပြလိုက်တာပါ …
တကယ်က ခညားတို့ နတ်ပြည်က အဲ့ဒီလောက်တောင် မသာယာပါဘူးဗျာ ..
ကျုပ် အထက်ကနေ အတိုင်းသား မြင်နေရတာပဲ .. ငွင်းးး ငွင်းး
မြန်မာရာဇဝင်မှာ ပျူစောထီး ဇတ်လမ်းမှ မဟုတ်ဘူးဗျ။ အခြားဇတ်လမ်း တော်တော်များများမှာလည်း အရမ်းကြီးတဲ့ အကောင်တွေ ပါတတ်တယ်။ အဲဒါက ဘာကို ပြသလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာ့မြေမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာက နှစ်ချို့ ကမ္ဘာဦး သတ္တဝါကြီးတွေ နေထိုင်ခဲ့ဖူးတယ် ဆိုတာကို ထင်ထင်ရှားရှား ပြတယ်။ ယုတ္တိလည်း ရှိတယ် ကိုအံစာတုံး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက အခုတောင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ သစ်တောထူထပ်တဲ့ နိုင်ငံတခု အဖြစ် နာမည်ရသေးတာပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ထောင်ကျော်ကဆို ဘယ်လောက် သစ်တောထူထပ်မလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားသာကြည့်တော့။ ဒီတော့ သဘာဝအရ တောထူလာတာနဲ့ တောကောင်ကြီးတွေ ကျက်စားဖို့ အခွင့်အရေးပဲလေ။
အဲဒီ ပင့်ကူရုပ်ကြီးဟာ အလှလုပ်ထားတာ မဟုတ်ဖူး ကိုအံစာတုံး။ ပင်းတယမြို့ သမိုင်းမှာ အရေးပါခဲ့တဲ့ အကောင်ကြီးပဲ။ အဲဒီ ပင့်ကူကြီးဟာ အဲဒီတုန်းက အဲဒီတောတောင်မှာ ကျက်စားခဲ့သတဲ့။ ရှမ်းကုန်းမြေမြင့်က အဲဒီတုန်းက တောင်အရမ်းထူပြီး ချိုင့်ဝှမ်းလိုတွေလည်း များတော့ ပင့်ကူလိုကောင်ကြီးတွေ နေဖို့ အကောင်းဆုံးပဲကိုး။ ဒွေးမယ်နော်တို့ ညီအမ ခုနှစ်ဖော် ဘုတ်တလုပ်ရေကန်မှာ ရေကစားပြီး လှိုင်ဂူထဲမှာလည်း ဝင်နားရော အဲဒီပင့်ကူကြီးက အမျှင်တွေနဲ့ ဂူဝကို ပိတ်လိုက်တယ်တဲ့။ ပင့်ကူမျှင်က ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ ဆိုတော့ သေးတဲ့ အမျှင်က ယောကျာင်္းကြီးတယောက် လက်မောင်းလုံးလောက် ရှိပြီး ကြီးတဲ့အမျှင်က ယောကျာင်္းကြီး တယောက် ပေါင်လုံးလောက် ရှိသတဲ့။ အဲဒါကို တောကစား ထွက်လာတဲ့ သုဓနုမင်းသားက တွေ့တော့ ညီအမ ခုနှစ်ဖော်ကိုလည်း ကယ်ပြီး ပင့်ကူကြီးကိုလည်း သူ့လေးနဲ့ ခွင်းပြီး သတ်လိုက်တယ်တဲ့။ အဲဒီ ပင့်ကူကြီးက အဲဒီတုန်းက စိတ်ဆိုးပြီး သူနေတဲ့ တောင်ကုန်းပေါ်က ကျွဲလောက် နွားလောက်ရှိတဲ့ ကျောက်တုန်းကြီးတွေကို ကန်ချတာ တောင်အောက်ရောက်တော့ အစိတ်စိတ် ဖြစ်ကုန်တယ်တဲ့။ နောက်တော့ မင်းသားရဲ့ လေးချက်နဲ့လည်း သေရော မင်းသားက အားရဝမ်းသာနဲ့ ပင့်ကူကိုရပြီ “ပင့်ကူရ” “ပင့်ကူရ” လို့အော်ရာက နောက်ကြာတော့ ပင်းတယမြို့ရယ်လို့ ဖြစ်လာတာပဲတဲ့။
အဲဒါကြောင့် ပင်းတယမြို့ ဆိုင်းဘုတ်မှာကတည်းက ပင့်ကူရုပ်တွေကို တွေ့ရတာ ကိုအံစာတုံး။
Best Comment ပါ ကိုစံလှကြီး ခင်ဗျာ …
ပင့်ကူကြီး ရာဇဝင်အပြင် …
ပင်းတယ ရယ်လို့ ဖြစ်လာပုံကိုပါ ပြောပြသွားတာ ..
ပြီးတော့ … ဖြစ်နိုင်ချေ တွေကို ပြောပြသွားတာ
အရမ်း ကောင်းလှပါတယ် ….။
ကျေးဇူးပါ ကိုစံလှကြီးရေ ….။
နတ်ပြည်က အဲဒီထက် သာယာသကွယ့်
မရွှေတုတ် ကတော့ …
အမှန်ဒွေ ပေါနေဗျန်ဘာဘီ ….
မရွှေတုတ် မျက်စိအား အရမ်း ကောင်းလွန်းတယ်ဗျာ …
မျက်စိ မကောင်းတဲ့လူဒွေ …
ပုံ မမြင်ရရင် ဒီစာကို သေချာ ပြူးပြဲပြီး ဖတ်ကြည့်ဂျဘာ … ငွင်းး ငွင်းး
ပင့်ကူကြီး ခမျာ ငြိမ်နေတာဘဲ။
သူ့အနား ဓာတ်ပုံ အရိုက်ခံနေတဲ့သူက….. ။
ကိုစံလှကြီး ကိုလဲ ရာဇဝင်လေးပြောပြလို့ ကျေးဇူးပါ။
ကျွန်မ ပင်းတယ ကို မရောက်ဘူး တဲ့ အပြင် မြို့နာမည်တွင်ရပုံ ကို အခုမှကြားဖူးပါတယ်။
ရွာထဲမှာ ကိုစံလှကြီး လို သမိုင်းပြောပြနိုင်တဲ့ လူ ရှိတာလဲ အင်မတန် အကျိုးများပါတယ်။
ကျွန်မ အမှန်ပြောတာနော်။ :hee:
သူ့အနား ဓာတ်ပုံ အရိုက်ခံနေတဲ့သူက….
ငေးကြည့်ပြီး ငြိမ်နေတာ ထင်ပါရဲ့ …
သူညားဒွေ အထင် မှားမှာ စိုးလို့ ရေးပေးရဒါဘာ .. အဟီးးး
ကျနော့်အနေနဲ့ သမိုင်းတို့ ရာဇဝင်တို့ ဖတ်ရင် ပုံပြင်ဆန်တယ်လို့ ထင်ရတဲ့ အချက်တွေကိုလည်း မပစ်ပယ်ပဲ လေးလေးစားစား ဖတ်လေ့ရှိတယ်။ ကျနော့် အမြင်အရ အဲဒီမှာလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အမှန်တရားတွေ ရှိနိုင်တယ်လို့လည်း ယူဆတယ်။ အမကြီး အမှန်ပြောတာ သိပါတယ်ဗျ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျနော် သတိထားမိသလောက် အမကြီးက ဝေဖန်ရင်လည်း နှစ်ဘက်မျှပြီး ပြောတတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ်။ နှစ်ဘက်မျှပြီး စဉ်းစားတတ်တဲ့ လူမျိုးဟာ သိပ်ပြီး တဘက်စောင်းနင်း မပြောတတ်ဘူးလို့ ကျနော်ထင်တယ်။ အမှန်တရားနဲ့လည်း ပိုနီးစပ်နိုင်တယ်။
ကျနော်က ဘယ်သူက အမှန်ပြောတာလည်း ဘယ်သူက ကြွားတာလည်း ဘယ်သူက ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ စကားကို လှည့်နေသလဲဆိုတာလည်း ကြည့်တတ်ပါတယ် အမကြီးရ။
အမှန်တော့ ဒီရာဇဝင်ဇတ်လမ်းလေးကို ဟိုတခါတုန်းကလည်း ပြောဖြစ်အုံးမလို့ စကားမကြုံတာနဲ့ မပြောဖြစ်လိုက်တာ။ ဇတ်လမ်းတခုလုံးကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာတွေချည်းပဲ။
မင်းတို့ရဲ့ ဘာမရှိ ညာမရှိ ဗြဟ္မာပြည်ကနေ ဦးမာဃတို့ရဲ့ နတ်ပြည်ကို အားကျပြီး ငေးကြည့်နေရတာများကွယ်
တီတီတာတာ ခြောက်မျက်နှာ မဟာရာဇာ အံစာ ခင်ည ……
နတ်ပြည်ကိုလိုက်မလား တဲ့ မစ်ခ်ျတာ ဥဥမာဂ ခေါ်နေတယ် …
ပြန်လာရင် နတ်တမီးလေး တစ်လောက်ဆွဲလာခဲ့ … ငိငိ ….။